Nkume Ngwá Nkume China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nkume Ngwá Nkume - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Nkume Ngwá Nkume)
Nkọwapụta ngwaahịa Na-eche echiche banyere ihe ngwọta ọdịnala nke oyi oyi? Chọta nkà na ụzụ ọhụrụ anyị iji nweta gị! Dị iche site na mmepe oku, anyị na-emepe ugbu a ụdị ihe ngwọta ọkpụkpụ, ihe nkiri ikpo ọkụ infrared. Ngwongwo Ugbo ala anyi di iche iche bu ihe igwe kpochapu ugbo nwere ọtụtụ uru dị ka ndị a :...
Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha A Na-ahazi maka Ngwọta Ahụhụ Mgbu
Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha A Na-ahazi maka Ngwọta Ahụhụ Mgbu Ezubere maka ọgwụgwọ mgbu azụ. Ihe mgbochi kpo oku nke infrared dị mma maka ahụike ahụ. Nkọwapụta ngwaahịa. Nke a kpo oku na mpe mpe akwa e mere maka ahụ ike na-elekọta usage.With anyị ọhụrụ technology nke anya infrared kpo oku film, ị pụrụ ịnụ ụtọ mma...
Nkume Ngwá Nkume Nkume Ngwá Agha Nkume Mma Nkpo Ihe Nkume Igwe Ọkụ Mmiri Nkume Nkasi Obi Nkasi Ntughari Na-eme Ngwá Agha Nkume Ngwá Ọrụ na Desktọpụ Nkume Na-ekpocha Nkịta